Georginio Wijnaldum oo diyaar u ah in kooxdiisa Liverpool uu kala qeyb qaato kulanka Manchester City – Gool FM
Dajiye July 24, 2018
(Liverpool) 24 Luulyo 2018. Kooxda Liverpool ayaa shaaca ka qaaday in Georginio Wijnaldum uu diyaar u yahay inuu ka qeyb galo kulanka saaxiibtinimo ay bari oo Arbaco ah la ciyaari doonaan Manchester City.
War rasmi ah ee lagu daabacay Website-ka kooxda Liverpool ayaa waxaa shaaca looga qaaday: “Georginio Wijnaldum ayaa ka soo kabtay cudur ku dhacay bilawga bishan iyada oo cudurka uu ku qasbay in uusan ka soo muuqan Reds”
Sida lagu sii xusay warka kasoo baxay kooxda ee ku aadan Georginio Wijnaldum.
“Georginio Wijnaldum wuxuu diyaar u ayahay inuu kala qeyb galo kooxdiisa kulamada soo aadan”.
Kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaa bari oo Arbaco ah la ciyaari doonto dhigeeda Manchester City kulan saaxiibtinimo, kahor inta inta aysan safarkooda dalka mareykanka kusoo xiranin sabtida soo aadan kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda Manchester United.
ARAG: Dalka Turkiga oo qaaday Talaabo CAJIIB ah ay ugu hiilinayaan Ozil kaddib markii uu iska Casilay xulka Jarmalka....+SAWIRRO
Diego Maradona oo si xoogan u dhaleeceeyay halyayga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Javier Zanetti